Thursday April 02, 2020 - 13:08:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dilal qorshaysan iyo qaraxyo ayaa saacadihii lasoo dhaafay gobollada Banaadir iyo Sh/hoose lagula beegsaday askar iyo saraakiil katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
Xoogag hubaysan ayaa xalay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ku dilay sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada dowladda Federaalka.
Sarkaalka ladilay oo magaciisa lagusoo gaabiyay Facoow ayay xoogag hubaysan ka toogteen qeybaha sare ee jirkiisa isagoona isla goobtii lagu weeraray ku dhintay, weerar kale oo ka dhacay halka loo yaqaan Sarkuusta ayaa lagu dilay askari boolis ah.
Xoogaga dilka ugeystay askariga ayaa horay usii qaatay qori AK47 ah oo uu watay askariga, dhinaca kale wararka ka imaanaya Sh/Hoose ayaa sheegaya in weeraro kala duwan lagu beegsaday ciidamada dowladda.
Qaraxa koobaad waxa uu ka dhacay nawaaxiga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana lala eegtay sarkaal iyo askari la socday oo saarnaa Mooto.
Waxaa qaraxa ku dhintay sarkaalka oo laba xidigle ah laguna magacaabi jiray Xasan Faarax, iyo askarigii la socday oo la oran jiray Cusmaan Jawaarey, mootada ay wateenna way burburtay.
Sidoo kale qarax ayaa ka dhacay degmada Afgooye, kaas oo lagu weeraray ciidamo katirsan dowladda federaalka, askarina ayaana ku dhaawacmey.
Qarax kale oo ka dhacay degmada Shalambood ayaa isagana waxaa ku dhaawacmey askari katirsan ciidamada Dowladda federaalka.
Shalay ayay aheyd markii qarax ka dhacay xaafadda Tarabuunka lagu dilay taliyihii saadka guutada 12-ka April iyo 2 askari oo ilaala u ahaa, waxaa muuqata in weerarada Al Shabaab ee Muqdisho iyo nawaaxigeeda ay sare usii kacayaan.